काठमाडौँ । दूरसञ्‍चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको पुँजीगत लाभकर सम्बन्धी विवादका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले फैसलाको पूर्णपाठ तयार गरे पनि शुक्रबारसमेत सार्वजनिक गरेन। भदौ ९ गते सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासले ६२ अर्ब..
सी र मोदीबीच भेटवार्ता, सीमा सम्बन्धी विशेष प्रतिनिधिहरुको बैठक बोलाउनेबारे छलफल
एजेन्सी । चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच ब्राजिलको राजधानी ब्रासिलियामा भेटवार्ता भएको छ । ब्राजिलमा जारी ब्रिक्स सम्मेलनका क्रममा सी र मोदीबीच भेटवार्ता भएको हो । बीबीसीका..
जमिन र घर नै चिराचिरा परेपछि त्रसित जनजीवन
काठमाडौं । साँगुरीगढी गाँउपालिका–५ तुङ्खाका बासिन्दा यतिबेला त्रासमा छन् । गाउँका ठाउँ ठाउँमा अचानक पानीको मुल फुटेर जमिननै चिरा चिरा पर्न थालेपछि उनीहरुको चिन्ता चुलिएको हो । सामान्यतया पानीको मुल बर्खामा..
काठमाडौँ । भारतसँग सीमा जोडिएको क्षेत्रमा पर्ने रौतहटको मठिया प्रहरी चौकीमा सोमबार दिउँसो भारतीय नम्बरको मोटरसाइकलमा आएका दुई जनाको समूहले सुतली बम प्रहार गरे। बमको छर्रा लागेर सेन्ट्री पोस्टमा खटिएका प्रहरी..
युट्यूब तथा सामाजिक सञ्जालमा भाइरल अघोरी बाबा पक्राउ
काठमाडौं । युट्यूब तथा सामाजिक सञ्जालमा ‘अघोरी बाबा’को रुपमा चर्चित बनेका विजय केसीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । केसीमाथि ठगी आरोपमा उजुरी परेपछि महानगरीय प्रहरी बृत्त बौद्धले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको हो..
उपल्लो मुस्ताङमा हिउँ पर्न थाल्यो, जनजीवन प्रभावित
ठिनी । उपल्लो मुस्ताङमा शुक्रबार बिहानदेखि हिउँ पर्न थालेको छ । दामोदरकुण्ड लोघेकर र लोमान्थाङ गाउँपालिकामा यो वर्ष पहिलोपटक हिउँ परेको हो । चराङ, मराङ, लोमान्थाङ, छोसेर र छोन्हुपमा हिउँ..
नेकपाले प्रदेश प्रमुखका लागि सिफारिस गर्‍यो ७ जनाको नाम (नामावलीसहित)
काठमाडौं । प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाले रिक्त प्रदेश प्रमुख नियुक्तिका लागि सरकारलाई नामहरू सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । बालुवाटारमा सोमवार बसेको सचिवालय बैठकले ७ वटै प्रदेशको प्रमुखका..
सुनकोशी नदीमा बस खस्यो, ६ जनाको मृत्यु
काठमाडौँ । दोलखाको मागा देउरालीबाट काठमाडौ आउँदै गरेको बा २ ख ७२४५ नम्बरको बस अरनिको राजमार्गको सुकुटे नजिकैबाट सुनकोशी नदीमा खस्दा ६ जनाको घटनास्थलमा नै मृत्यु भएको छ । अरनिको यातयात..
बाग्लुङमा केन्द्रबिन्दु भएर भुकम्प गयो
काठमाडौं। पश्चिम बागलुङको तमानखोला गाउँपालिकाको खुनखानी नजिकै केन्द्रबिन्दु बनाएर भूकम्प गएको छ । शुक्रबार बिहान ३ बजेर ५१ मिनेटमा ४.५ रेक्टरस्केलको भुकम्प गएको राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रले जनाएको छ । भूकम्प..
कृष्णनगरमा गोली लागेर एक जनाको मृत्यु, स्थिति तनावग्रस्त, कर्फयू लाग्यो
कपिलवस्तुको सीमा नाका कृष्णनगरमा प्रहरीको गोली लागेर एक व्यक्तिको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा स्थानीय सुरज पाण्डे छन् । लक्ष्मी पूजाको मूर्ती विर्सजन गर्ने क्रममा दुई पक्षबीच विवाद हुँदा हिजो..
काठमाडौं । आईसीसीले जारी गरेको टी२० क्रिकेटको नयाँ वरियातामा नेपाल एक स्थान माथि उक्लिएको छ । ११ कात्तिकमा जारी गरिएको वरियतामा नेपाल १२औँ स्थानमा छ । नयाँ वरियतामा टेस्ट मान्यता प्राप्त..
काठमाडौं। गत वर्षभन्दा १६ स्थान सुधार गर्दै नेपाल इज अफ डुइङ बिजनेस इन्डेक्समा माथि उक्लिएको छ। विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको डुइङ बिजनेस इन्डेक्सको सूचीमा नेपाल अघिल्लो वर्ष ११०औं स्थानमा रहेको थियो..
ग्लोबल आइएमई बैंक र अलबिलाद बैंकबीच रेमिट्यान्स सम्झौता
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंक र साउदी अरबको बैंक अलबिलादबीच रेमिट्यान्स सेवा सुरु भएको छ। साउदी अरबको बैंक अलबिलादको मुख्य कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा दुई बैंकबीचको सहकार्य बुधबारदेखि औपचारिक रुपमा सुरु..
'हामी पनि नाच्ने हो बिच बिचमा' गीतका गायक दुर्गेश थापा पक्राउ
काठमाडौं । गायक दुर्गेश थापालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । अपराध महाशाखाको टोलीले मंगलबार थापालाई पक्राउ गरेको पुष्टि गरेको छ । देउसी भैलोको गीत बिगारेर सामाजिक सहिष्णुता बिगारेको आरोपमा थापालाई पक्राउ..
विवादमा तानियो ‘ह्याप्पी तिहार’ गीत, दुर्गेशलाई खोज्दै प्रहरी
काठमाडौं । ‘हामी पनि नाच्नुपर्छ बीच्च–बीच्चमा’ गीत गाएर चर्चित बनेका गायक दुर्गेश थापा तिहारको मुखमा गाएको ‘ह्याप्पी तिहार, चिसो बियर’ गीतले विवादमा तानिएका छन् । तिहारको गीतभित्र उनले गाएको ‘ए निकाल..
काठमाडौं । प्रहरीले अवैध विदेशी मुद्रासहित पाँच जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। प्रहरी कार्यालय दाङबाट खटिएको टोलीले शनिवार दिउँसो रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिका वडा नम्बर २ सरौलीबाट उनीहरुलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। पक्राउ पर्नेहरुमा..
काठमाडौँ। प्रहरीले नक्कली नेपाली रुपैयाँ छाप्ने तीन जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। महानगरीय प्रहरी वृत बौद्धको टोलीले नयाँबस्तीबाट तीन जनालाई नियन्त्रणमा लिएको हो। प्रहरीले दोलखा मेलुङ गाउँपालिकाका राजन परियार, सन्तोष नेपाली र..
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका पदाधिकारीले लिइरहेको तलब र भत्तालाई गैरसंवैधानिक ठहर्‍याएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा तथा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक..
काठमाडौं । राज्य विरुद्ध सशस्त्र गतिविधी गरिरहेको नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा माओवादीका मध्यपश्चिम ब्यूरो कमाण्ड इन्चार्ज चन्द्रबहादुर चन्द पक्राउ परेका छन् । नेपाल प्रहरीको विषेश टोली र प्रदेश नम्बर ५ प्रहरी..
काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री मधुकर शमशेर राणाको बुधवार निधन भएको छ । पटक–पटक वाइपास सर्जरी गरीदैं आएका उनी वर्षौंदेखि बीरामी थिए । पारिवारिक स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार उनको काठमाडौंस्थित मेडिसिटी अस्पतालमा उपचारको..
काठमाडौं । एकपछि अर्को सांसद पक्राउ परिरहेका बेला नेकपा सांसद पार्वत गुरुङका नाममा पक्राउ पूर्जी जारी भएको खुलासा भएको छ । जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट गुरुङका नाममा म्याद तामेल गर्न दोलखा पत्र..
मृगौला बिक्रीको आरोपमा निदान अस्पतालका सीईओसहित ५ जना पक्राउ
काठमाडौं । एक व्यक्तिको नाममा अर्कै व्यक्तिको मृगौला झिकेको आरोपमा प्रहरीले ललितपुरको निदान अस्पतालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसहित ५ जनाललाई पक्राउ गरेको छ । पुल्चोकस्थित उक्त अस्पतालले एक व्यक्तिको नामम अर्कैको मृगौला..
काठमाडौं । म्यानमारको राजकीय भ्रमणमा जाने क्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी शितल निवासबाट हेलिकोप्टर चढेर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगेकी छन् । राष्ट्रपति सडक मार्ग भएर विदेश भ्रमणमा जाँदा हुने चर्को जामका कारण..
काठमाडौं । नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान पारस खड्काले राजिनामा दिएका छन् । खड्काले कप्तानबाट राजिनामा दिएका हुन् । अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल आईसीसीले नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको निलम्बन फुकुवा गरेको भोलिपल्ट..
एजेन्सी । सिंगापूरले विश्वको सबैभन्दा प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रमा अमेरिकालाई हराउँदै शीर्ष स्थान हासिल गरेको छ । बुधबार प्रकाशित वार्षिक ‘कम्पिटिटिभनेस’ रिपोर्टमा यसले अर्थप्रणाली, आर्थिक स्थिरता, आधारभूत संरचना, पारिश्रमिक बजार र नवीन..
काठमाडौं । निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महराबाट बलात्कार प्रयासकी पीडित रोशनी शाहीको शरीरमा लागेका चोटपटकमा बाहिरी मानिसको संलग्नता रहेको पुष्टि भएको छ । त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा गरिएको फरेन्सिक जाँचबाट रोशनीको अनुहार..
काठमाडौं । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन पिङको नेपाल भ्रमण निश्चित भएसँंगै काठमाडौं सिंगारिन थालेको छ। आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने मन्त्रालय र स्थानीय निकायलाई अहिले भ्याई–नभ्याई छ। यही ‘असोज २७ गते नेपाल..
काठमाडौं । अष्ट्रेलियाले नेपालसमेत तीन देशका विद्यार्थीलाई त्यहाँ जानको लागि कडाइ गर्ने तयारी गरेको पाइएको छ । त्यहाँको पत्रिका फाइनान्सियल रिभ्युले आफ्नो पछिल्लो अंकमा जनाएअनुसार सरकारले नयाँ नीति ल्याइसकेको भए..
डीभी भर्दै हुनुहुन्छ ? अमेरिकी दूतावासले यस्तो सूचना निकाल्यो
काठमाडौं । सन् २०२१ का लागि डीभी चिट्ठाको आवेदन खुलेको छ । अमेरिका जान चाहनेहरूका लागि यो निकै सुनौलो अवसर हो । डीभी परेमा अमेरिकामा आवासीय अनुमति प्राप्त हुन्छ । डीभी भर्न..
महरा प्रकरण : रोशनी शाहीलाई पतिले दिए डिभोर्स
काठमाडौं । निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महराविरुद्ध यौन दुर्व्यवहारको आरोप र त्यसपछि बयान फेरेर चर्चामा रहेकी रोशनी शाहीलाई उनका पति चित्रजंग शाहीले डिभोर्स दिएका छन् । २८ वर्ष लामो वैवाहिक सम्बन्धलाई अन्त्य..
Results 1994: You are at page4of 67